Nezvedu - Kingtone Girazi Zvigadzirwa Co., Ltd.
Xuzhou Kingtone Girazi Zvigadzirwa Co., Ltd.
Xuzhou Kingtone Packing inotungamira mukutengesa kweprimiyamu uye yakasarudzika girazi kurongedza kwechikafu uye chinwiwa, indasitiri yekuchengetedza wega. Isu takatangwa muna 1985 uye tine makore anopfuura makumi maviri 'ekugadzira ruzivo. Tine hunyanzvi hwekugadzira ruzivo uye isu takashongedzerwa nehunyanzvi hwehunyanzvi uye epamberi zvigadzirwa zvekugadzira. Isu tinogara tichigadzira zvigadzirwa zvinoenderana neyakajairwa nyika uye zvigadzirwa zvedu zvine mukurumbira muChina zvemhando yepamusoro. Isu takabudirira kupfuura ISO9001: 2000 Certification.Ou vatengi vari kutenderera pasirese, pamusoro penyika zana.
Isudzakatangwa muna 1985 uye vane makore anopfuura 20 'mukugadzira ruzivo. Tine hunyanzvi hwekugadzira ruzivo uye isu takashongedzerwa nehunyanzvi hwehunyanzvi uye epamberi zvigadzirwa zvekugadzira.
"Yepamusoro mhando, inonzwisisika mitengo & inonzwisisika mushure-yekutengesa sevhisi" ndiyo nheyo yedu, "Kugutsikana kweVatengi" ndicho chinangwa chedu chekusingaperi; Zvigadzirwa zvedu zvakave zvichizivikanwa zvakanyanya mumisika zhinji kumba uye kutenderera pasirese.
Tine mukurumbira wakanaka wekupa hunyanzvi hwemhando yepamusoro uye nebasa rehunhu. Panguva imwecheteyo, isu tichiri kuchengeta mutengo padanho rinokwikwidza kune vatengi kuitira kuti vawane mikana yakawanda uye purofiti mumusika.
Tine anopfuura makore makumi maviri nemakumi maviri eindasitiri ruzivo
Zvikurukuru, Xuzhou Jintong inopa mabhodhoro egirazi uye akasiyana zvishongedzo (anodonhedza machipisi, pfapfaidzo pombi, idenderedzwa nguwani, nzimbe tsvimbo, macorks uye makapeti). Isu tine angangoita makore makumi maviri ezviitiko muindasitiri yekupakira uye inogona kupa mhando yepamusoro uye inyowani zvigadzirwa zvegirazi ekupakata zvigadzirwa zvepasi rese nerunako rwekuchengetedza ganda.
Ese edu epamberi ekugadzira zvivakwa anosangana neUS zviyero uye ari FDA akasimbiswa, saka isu tinogona kuzadzisa izvo zvinodikanwa zvevapamba uye zvepasi rese vatengi. Uye zvakare, iyo kambani zvakare ine yekudhinda skrini, kupenda, zororo, electroplating tekinoroji, kusangana nezvinodiwa zvevapamba uye vekunze vatengi vakasarudzika.Tine zvinopfuura 60,000 mativi emakumbo matura matinochengetera zvinopfuura mamirioni makumi maviri zvigadzirwa kuti tione ipapo ipapo kugutsikana kwevatengi uye chengetedza nguva pfupi yekuendesa.